I-Arrows isithwele amathemba eKZN eNedbank Cup | News24
I-Arrows isithwele amathemba eKZN eNedbank Cup
PHOTO: gallo images UMabudi Khenyeza ujabulela igoli lakhe alishaya emdlaweni we Nedbank Cup last 16 phakathi kweGolden Arrows neNatal United yaseMsinga ekundleni yaseChatsworth ngo-22 March kuwo lo nyaka. I-Arrows yanqobe ngo-1-0. Abafana Bes
ABALANDELI bebhola eMzansi ngeke basolwe kule mpelasonto yakusasa uma bethi nje ukukhohlwa eyeligi, bagxile kancane kweyomqhudelwano weNedbank Cup esaqhubeka.
Phela, iqiniso lithi imithandazo nezinhliziyo zabo bonke abalandeli bebhola baseKwaZulu-Natal zizobe zikwiNedbank Cup kule mpelasonto futhi befisela iqembu lalesi sifundazwe iLamontville Golden Arrows ukube iqhubekele phambili kulo mqhudelwano.
Phela Abafana Bes’thende yilona kuphela iqembu yaseKZN elisekhona kwiNedbank Cup emva kokuphumelela ngenhlanhla ka1-0 kwiNatal United yaseMsinga emdlalweni owawubanjelwe enkundleni iChatsworth emasontweni amabili edlule. Lapha i-Arrows yawina ngegoli elashaywa uMabhuti Khenyeka sekuvalwe amehlo.
UKhenyeza wavuma ukuthi ezakhe zapulukutshela ngembobo yenaliti ngoba phela uMsinga wawungazwile futhi watshengisa ukuthi uyiqembu langempela nelizimisele ukuya kude.
“Kwakukubi impela, mhlawumbe nathi sasizwa wukuthi sinabadlali abaningi abanesipiliyoni (experience) futhi-ke nje kade kwasa sibona sinethwa nayizimvula kulo mdlalo,” kusho uKhenyeza.
Phela kuzothi ngoMgqibelo i-Arrows ihambele ePolokwane lapho iyobambana khona neSuperSport United ePeter Mokaba Stadium ngo-8:15 kusihlwa.
UKhenyeza uthi yena ngokwakhe ukuthi umdlalo usebusuku ekuhambeni akusho lutho kodwa bayazi ukuthi kuzoba umdlalo onzima nozodinga ukuzimisela ngayoyonke indlela.
“Thina asikhathazekile ukuthi sizobe sidlalela kude ekuhambeni ngoba phela iningi lethu kade kwasa lihamba ngenxa yalo mdlalo.
“Phela uma uwumdlali kufanele wazi ukuthi uyohlala usemgwaqeni njengesotsha.
“Mhlawumbe into esingathi siyigade kakhulu ukuthi siyobe sidlala neSuperSport United.
“Phela uma udlala nala madoda akusiniswa mahleza futhi bayiqembu elukhuni kabi, kodwa-ke nathi sibalindele
“Futhi ngeke sibavumele nje ukuthi bazenzele ngokuthanda kwabo, phela nathi siyiqembu njengabo,” kusho uKhenyeza.
UKhenyeza uthi ezakhe zifuna ukuqhubekela phambili kulo mqhudelwano baze bafike kowamanqamu.
Umqeqeshi weSuperSport United uGordon Igesund uthi angeke nje bayithathe kancane i-Arrows ngoba phela iNedbank Cup inomlando omubi wokuqhathulula amaqembu amakhulu.
“Ngayoyonke inhlonipho yami, emqhudelwaneni wezinkomishi njengalo, alikho iqembu elincane nelidlala kwiNational First Division (NFD) nakwiPSL, wonke amathimu ayafana,” kusho uGordon Igesund.
Kanti kusasa ngoLwesihlanu i-Ajax Cape Town engaphansi kuka Roger De Sa izibhekana neBidvest Wits eqeqeshwa uGavin Hunt